Ergada ka qayb-galaysey shirkii Cadaado oo gacmaha isula tegey |
Ergada ka qayb-galaysey shirkii Cadaado oo gacmaha isula tegey
Wararka ka imaanaya magaalada Cadaado ee uu ka socdo shirka maamulka loogu dhisaayo gobolada dhexe ayaa la sheegayaa in ergadii shirku gacmaha isula tageen kadib markii buuq halkaas ka dhashey.
Wararku waxay sheegayaan in qaar kamid ah ergado ay isla dhaceen kuraastii ay ku fadhiyeen sida uu warbaahinta u sheegay Mahad Diiriye oo kamid ah ergada, waxaana uu sheegey in la jeex-jeexey Axdigii kumeel-gaadhka ahaa ee meesha la keenay.
Sababta buuqa dhalisey ayaa lagu sheegey in ay ka dhalatey ka doodista axdiga kumeel-gaadhka ah, kadib markii ergada loo qaybiyey, ayaa la sheegayaa in guddoomiyaha guddiga farsamadu haweeneyda la yidhaahdo Xaliima Yarey ay khudbad u jeedisey sheegteyna in aan waxba laga bedeli doonin Axdigan ee ay sidaas ku ansxiyaan, waxaan Axdigu dhigayaa in caasimaddu tahay Dhuusamareeb, taas oo in badan oo kamid ah regadu diidan tahay.
Nabadoon Axmed Garbacune oo ka mid ahaa Ergooyinka shirka ku jiray ayaa sheegay in shirka uu marayo meel aan laga soo laaban kerin ayna sababi karto in uu burburo, Ergooyinka ayuu sheegay in qaarkood ayba ka soo qayb galin saaka shirka.
Guddiga farsamada shirkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirku u socdo sidii loogu tal galay ayna jiraan arrimo ay ku sheegeen faragelin banaanka ah oo ay ku eedeeyeen siyaasiyiin dano gaar ah wata sida ayba sheegtay Gudoomiyaha gudigan Xaliimo Ismaaciil Ibraahim.